Kirin 710: A na-agbanwe usoro nhazi Huawei n'etiti | Gam akporosis
Kirin 710: Nhazi usoro ohuru nke Huawei
Izu ole na ole gara aga Ekwuwapụtara na Huawei ga-eweta Kirin 710 n'oge na-adịghị anya, ihe nhazi ọhụụ. Dị ka aha ahụ na-egosi, ọ na-erute otu mpaghara ahịa dị ka Snapdragon 710. Ya mere, a na-eche ya maka etiti dị n'etiti, nke na-aga n'ihu nke ukwuu n'ahịa. N'ikpeazụ, akara ndị China ekwuputala ọkwa ọhụrụ a.
N'ihi nke a anyị nwere Huawei Kirin 710 nkọwa dị. Site na ihe anyị nwere ike ịhụ ihe nhazi ọhụụ nke onye nrụpụta China mebere. Nke a bụ nnukwu mmụba maka akụkụ ahịa a maka akụkụ ya.
Anyị na-ezute tupu Huawei onye nhazi izizi nke imepụta na 12 nm. Nke a bụ usoro dị oke mkpa maka onye nrụpụta na imepụta ndị nrụpụta. Ebe ọ bụ na a na-atụ anya ya n'ụzọ a na anyị ga-enwe ndị na-arụ ọrụ nke ọma na akụkụ ha n'ọdịnihu dị nso.
Huawei Kirin 710 bụ isi ihe nhazi asatọ. Anyị nwere cores abụọ Cortex A75 nke ruru ọsọ nke 2.2 GHz. Ọ bụ ezie na n'aka nke ọzọ anyị nwere ihe abụọ Cortex A53 ndị ọzọ, nke na nke a nwere ọsọ nke 1,7 GHz. Na mgbakwunye, ọ ga-enwe Mali G5 GPU. Achọpụtakwara na ọ ga-enwe LTE na Dual Sim 4G Volte nkwado.
Amamịghe echiche na-egosi na Huawei Kirin 710. Ọ ga - enyere igwefoto aka n'ọnọdụ niile, gụnyere obere oge. Ọ ga-abụkwa maka ịkwalite ihe mmetụta mmeghe ihu na ekwentị ndị na-eji ya ga-enwe.
Kirin 710 na-ekwe nkwa ịbụ onye nhazi etiti maka ekwentị ọhụrụ Huawei. Ka ọ dị ugbu a ekwupụtabeghị ụdị nke ika ahụ ga-abụ ndị ga - eji ya, ewepu Huawei Nova 3i, nke etinyegoro. Maka ndị ọzọ, anyị enweghị aha. Anyị na-atụ anya ịnụ gị n'oge na-adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » Kirin 710: Nhazi usoro ohuru nke Huawei